ဂျပန်နံပါတ် ၁ မှ ၅၀ အထိသူတို့၏အသံထွက် - UniProyecta
ဂျပန်ဘာသာစကားသည်လူများအတွက်အရှုပ်ထွေးဆုံးဘာသာစကားတစ်ခုဖြစ်သည်။ အခြားဘာသာစကားများကဲ့သို့သင်တို့သည်တသမတ်တည်းရှိပြီးအပတ်တိုင်းလေ့ကျင့်ရန်လိုသည်။ ကံအားလျော်စွာ၊ ဂဏန်းများကိုဂျပန်ဘာသာ ၎င်းတို့သည်သင်ယူရန်အတော်လေးလွယ်ကူသည်၊ ထို့ကြောင့်ဤဘာသာစကားကိုစတင်သင်ယူရန်နေရာကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
မည်သည့်ဘာသာစကား၏ဂဏန်းကိုမဆိုသင်ယူခြင်းသည်အခြေခံကိုစတင်သင်ယူရန်ကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဂျပန်လိုဂဏန်းတွေရဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့အချက်ကအဲဒါဘဲ စာလုံး ၁၁ လုံးသာ သုံး၍ ၉၉၉ သို့ရေတွက်နိုင်သည်စကားလုံး ၁၁ လုံးကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးနိုင်ဖို့နံပါတ်တွေရဲ့စည်းမျဉ်းတွေကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပေမယ့်။
အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော်ဂျပန်ဘာသာ၌ဂဏန်းများသည်စပိန်နှင့်အခြားဘာသာစကားများကဲ့သို့ဖြစ်မလာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာစပိန်ဘာသာစကားတွင် 'သန်းတစ်ရာ' ဟုဆိုရာတွင်သုည ၁၀၀,၀၀၀,၀၀၀ ကိုအုပ်စုဖွဲ့ရန်လိုအပ်သည်။ ၌ရှိနေစဉ် ဂျပန်အက္ခရာများကိုလေးလုံးဖြင့်လေးစုခွဲထားသည်ဒါကြောင့်ငါတို့ ၁၀၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀၀ ကိုတွေ့လိမ့်မယ်။
1 ဂျပန်ဂဏန်းများကို ၀ မှ ၉ အထိလေ့လာပါ
ဂျပန်နှင့်တရုတ်ဂဏန်းများအကြားကွဲပြားခြားနားမှုများနှင့်တူညီချက်များကိုသတိပြုရန်အရေးကြီးသည့်အကြောင်းအရင်းမှာဂျပန်ရှိဂဏန်းများသည်တရုတ်ပုံစံမှဆင်းသက်လာသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းကိုသတိပြုနိုင်သည် တရုတ်အက္ခရာများ (sinograms) သည်ဂဏန်းများအတွက်ဂျပန် kajis နှင့်တူသည်မရ။ တစ်ခုတည်းသောခြားနားချက်မှာရေတွက်ခြင်းနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ဥပမာအားဖြင့်တရုတ် sinograms နှင့်ဂျပန် kajis နှစ်ခုစလုံးတွင် ၁ ကို by ကသတ်မှတ်သည်။ ဒါပေမယ့်အခြားနံပါတ်တွေမှာဂျပန်က Kaji uses ကိုသုံးတဲ့ဂဏန်း ၁၀၀ ကဲ့သို့အချို့သောကွဲပြားခြားနားမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်ပါတယ်။ သူတို့နှစ်ယောက်လုံးက 'တစ်ခါတစ်ရာ' ဟုဆိုလိုသည်။ တူညီသောအရာသည် ၁၀၀၀ ဖြစ်ပြီးဂျပန်ဘာသာ၌千နှင့်တရုတ်လို一千ဖြစ်သည်။
ဤတူညီသောခြားနားချက်ကို ၆၀၀ သို့မဟုတ် ၂၀၀၀ ကဲ့သို့ဂဏန်းများတွင်တွေ့ရပြီးတရုတ် ၁ တွင်တစ်သောင်း၊ တစ်ရာသို့တစ်ထောင်ကိုရည်ညွှန်းသည်၊ ဂျပန်၌မထည့်ပါ။
ဂျပန်ဂဏန်းများကို ၀ မှ ၉ အထိလေ့လာပါ
မည်သည့်ဘာသာစကားတွင်မဆိုရေတွက်ရန်ပထမဆုံးလုပ်ရမည့်အရာသည် ၀ မှ ၉ အထိဂဏန်းများကိုလေ့လာရန်ဖြစ်သည်။ ဤကိန်းဂဏန်းများသည်ကျွန်ုပ်တို့ရှာတွေ့နိုင်သောဂဏန်းအားလုံး၏အခြေခံဖြစ်သည်။
ဤသဘောအရဂျပန်ဂဏန်းများသည်အတူတူအလုပ်လုပ်သည်၊ ၎င်းတို့သည်ပြိုကွဲသည်။ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအကြံဥာဏ်ကိုပေးနိုင်ရန်အောက်ပါနံပါတ်၊ kanji၊ hiragana၊ romaji စာသားနှင့်အသံထွက်တို့ကိုကြည့်နိုင်သောဇယားတစ်ခုကိုငါဝေမျှပါလိမ့်မည်။
ဂဏန်း ရာတွင်ခန်းဂျီး ဟီရာဂါ ရိုမာဂျီ အသံထွက်
0 零 သုည rei rei
1 တစ်ဦးက いち // いつ Ichi / itsu Ichi / itsu
2 နှစ် သို့ ni အဘယ်သူမျှမ
3 သုံး မစ္စတာ san က ဆန်း
4 လေး し//よん shi / yon shi / yon
5 ºº” မင်းရဲ့ go go
6 å… ろく Roku Roku
7 ခုနှစ် しち //なな shichi / nana shichi / nana
8 ရှစ် ပျား အချစ် အချစ်
9 ကိုး きゅう // く kyü / ku kyu / ku ဖြစ်သည်
သင်ဇယားကိုအလွတ်ကျက်ပြီးလေ့ကျင့်ပြီးပြီလား။ ဤဇယားကိုကျွမ်းကျင်ခြင်းသည်ဂျပန်ဘာသာစကားကိုစတင်လေ့လာရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင် kanji နှင့် kana ကိုလေ့လာရန်မဆုံးဖြတ်မီအသံထွက်နှင့်ပါးစပ်အပိုင်းဖြင့်စရန်ကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုသည်။
အထက်ပါဇယားတွင်သင်လိုအပ်သောခြေစွပ်များအားလုံးရှိနှင့်ပြီးသားဖြစ်သည် ပိုမိုရှုပ်ထွေးသောကိန်းဂဏန်းများအကြောင်းပြောရန်အချို့နံပါတ်များလိုအပ်သည်မရ။ အထက်ပါဇယားမှဂျပန်ဂဏန်းများကို သုံး၍ ယခုပိုကောင်းသောနံပါတ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်နိုင်သည်။ အောက်ပါဇယားကို သုံး၍ သင်လိုချင်သောနံပါတ်အားလုံးကိုရေတွက်နိုင်သည်။
10 တကျိပ် နှစ်ဆယ် ju ji
20 နှစ်ဆယ် にじゅう နီဂျူ နီဂျူ
30 သုံးဆ さんじゅう Sanjü ဆန်ဂျူး
၁၀၀၀ (တစ်သောင်း) တသောင်း まん လူကို လူကို
၁၀ ၀၀၀ (တစ်သိန်း) ၏ じゅうまん ဂျူမန် ju-man ပါ
၁၀၀ ၀၀၀၀ (တစ်သန်း) ၏ ひゃくまん hyakuman hyakuman
၁၀၀၀ ၀၀၀၀ (ဆယ်သန်း ဆယ်သန်း いっせんまん ထုတ်ပေးသူ ထုတ်ပေးသူ
၁ ၀၀၀ ၀၀၀ (သန်းတစ်ရာ) 億 おく ဖတ်ပါ ဖတ်ပါ
အပေါ်ကဇယားမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်းဘဲ၊ ဒါဟာတကယ်ကိုရိုးရှင်းပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်ဂဏန်း ၂ နှင့် ၁၀ ကိုနှစ်ကြိမ်ဆယ်ပါ။ ဤနည်းအားဖြင့် kanji နှင့် hiragana တွင်ရေးသောအခါအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုကိုတွေ့သော်လည်း romaji ၌တူညီသည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ ၂ ယောက်ကို ၁၀ မတိုင်ခင်အမြဲထားရမယ်။
ဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဂဏန်းများကိုစပိန်စကားပြောသောငါတို့နှင့်မတူသောနည်းလမ်းဖြင့်အုပ်စု (၄) အုပ်စုကိုသုံးအုပ်စုများအစားသုံးသည်။ ဒါကငါတို့ငယ်စဉ်ကတည်းကသူတို့ကိုသုံးယောက်အုပ်စုတွေနဲ့ခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကငါတို့ဂဏန်းတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့အလေ့အထကြောင့်ရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်စေနိုင်တဲ့အလွန်ရိုးရှင်းတဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုပဲ။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းကကိန်းဂဏန်းတွေကိုဘယ်လိုအချိန်တိုင်းကြည့်နေစရာမလိုဘူး၊ မင်းဒီမှာမင်းမင်းဒေါင်းလုပ်ဆွဲပြီးမင်းရဲ့လက်ကိုင်ဖုန်းမှာမင်းအမြဲသယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပုံတစ်ပုံကိုငါတို့ထားခဲ့မယ်။
၃၀၀ လို့ပြောရင်အဲဒါကိုပြောတာ sanhyaku ပါမပါလျှင် sanbkyaku (an kanji နှင့်さんびဟီရာဂါနာမြို့ (く)
၆၀၀ (六百) လို့ပြောရင်မင်းပြောတာ ရော့ပီယာကူ (ろပြီးပြည့်စုံတဲ့ゃく) အစား rokuhyaku.
၈၀၀ (八百) လို့ပြောရင်မင်းပြောတာ ပျော်ရွှင်ပါစေ (はပြီးပြည့်စုံတဲ့ゃく) အစား hachihyaku.
၃၀၀၀ (三千) လို့ပြောရင်မင်းပြောတာ san sen တရုတ် ဆန်ဇင် (さんぜん) ။
8000 (八千) လို့ပြောရင်မင်းပြောတာ hassအပေါ်
အဆုံးသတ်ရန်၊ ငါတို့သည်သင်တို့ထံမှဂဏန်း ၁ လုံးမှ ၁၀၀၀ အတွင်းအသံထွက်အသံများကိုကြားနိုင်ရန်ဤဗွီဒီယိုကိုပြင်ဆင်ထားပြီ။
categories ဘာသာစကား, ဂျပန် လက်မှတ်အညွှန်း
စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » ဘာသာစကား » ဂျပန် » ဂျပန်ဂဏန်း ၁ မှ ၅၀ အထိ
"ဂျပန်ဘာသာဖြင့်ဂဏန်း ၁ မှ ၅၀ အထိ" မှတ်ချက် ၆ ချက်
9:2018 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 54
ni ၏ဂျပန်ဘာသာ၌ဒဿနိကဗေဒအဓိပ္ပာယ် "သွား"; "ဂျူ"
21:2018 pm မှာဒီဇင်ဘာလ 11, 14
6:2019 pm မှာဖေဖော်ဝါရီလ 4, 45
1:2019 pm မှာမေလ 2, 58
8:2019 pm မှာဇွန်လ 2, 14
အခု…။ တစ်ယောက်ယောက် otaku လား? : v
ဒီမှာ otaku တစ်ခုထက်ပိုရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။ >
5:2019 pm မှာသြဂုတ်လ 2, 03